Akhriso Qaraxyo Ka Kala Dhacay Boosaaso Iyo Jowhar. – Calamada.com
Akhriso Qaraxyo Ka Kala Dhacay Boosaaso Iyo Jowhar.
Qaraxyadan oo lala beegsaday Saldhigyo ay ku sugnaayeen maleeshiyaatka maamulada isku magacaabay Puntland iyo Hirshabeelle ayaa ka kala dhacay magaalooyinka Boosaaso iyo Jowhar ee Xarumaha Wilaayaatka Bari iyo Shabeelada dhexe.
Qaraxa hore ee lala beegsaday Maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Puntland ayaa ka dhacay Saldhiga Biyo Kulule ee magaalada Boosaaso iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi.
Xilliga qaraxa waxaa Saldhiga ku sugnaay Saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan Ashahaado la dirirka Puntland waxaana jirta khasaara Murtadiinta lagu gaarsiiyay Qaraxaasi.
Dhanka Degmada Jowhar ee Wilaayada Shabeelada dhexe waxaa qarax uu ka dhacay Kontaroolka dhanka Waqooyi ee magaalada Jowhar,iyadoona qaraxan si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada.
Qaraxan ayaa sidoo kale sababay khasaara Nafeet iyo mid hanyiyadeed oo soo gaartay Maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka isku magacaabay Hirshabeelle.
Qaraxyadan ka kala dhacay Waqooyga iyo Konfurta Somalia islamarkaana lala beegsaday maleeshiyaatka maamulada gaala raacyada ah ee Hirshabeelle iyo Puntland ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada Mujaahidiinta Xarakada Alshabaab ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah Kufaarta iyo Murtadiinta isu soo baheystay la dagaalanka diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta.
Previous: Askar American Ah Oo Lagu Dilay Dalka Afghanistan.
Next: Weerar Askar Lagu Dhaawacay Oo Ka Dhacay Dalka Mareykanka.